Ziziphi iindlela zokufumana i-free ezamahala kodwa ezisebenzayo zilandela i-backlinks?
Ukufumana i-backfinks backlinks ibaluleke kakhulu kwixesha lokukhangela injini yokukhangela. Bakhonza ukuphakamisa amandla emvelaphi yakho yewebhu kwimiphumo yokusesha. Wonke umntu uyazi ukuba iGoogle inikezela ngakumbi inani lokulandela i-backlinks, ukudlulisela ngeendlela ezihamba kumaphepha ewebhu.
Kukho abaninzi abatsha kwiimarike zedijithali abakhangela iindlela ezilula zokudala izixhumanisi ezingenayo kwiiwebhusayithi zazo.Nangona kunjalo, kude nezo zonke izixhobo zokwakha izixhumanisi zilandela izikhokelo zezinga le-Google. Ngenxa yoko, i-webmasters abangenalwazi bangafumana nayiphi na imiphumo malunga nokuthutha kunye neendawo zokubala okanye ukufumana izigwebo kwiinjinjini zokukhangela.
Kulo nqaku, ndingathanda ukwabelana nawe ngeendlela ezisebenzisekayo kunye nezithembekileyo zokufumana ii-backlinks kunye nokuphakamisa izikhundla kwiphepha lemiphumo yosesho. Ngethemba, ezi zixhobo zoqhagamshelwano lwezonxibelelwano ziya kukunceda ukuba ufumane ezinye izithuthi ezivela kwiinjine zokukhangela.
Okokuqala, makhe sixoxe ngendlela esinokukwazi ngayo ukwahlula phakathi kweefayile ezilandelayo kunye no-backlinks.
njani ukujonga uhlobo oluthile lwe-backlink onayo?
Kuphawuleka ukuba ukwazi umehluko phakathi kwezi ntlobo zekhonkco ezingenayo njengoko zinalo ixabiso elithile kwi-injini yokukhangela injini yewebhu.
Iifayile ezilandeleyo zilandelayo zikhonkco ezinokuthi "zenze" itekisi kwisakhiwo sazo kwaye idlulise ijusi yekhonkco kumthombo wewebhu omnye ukuya kwenye. Ngale ndlela, yenza i-backlinks eyenziwe kwii-PR eziphezulu zenza iimpawu ezixabisekileyo kumthombo odibeneyo, ukubonisa iGoogle igunya leli gama kunye nexabiso layo kubasebenzisi.
Ukujonga ukuba ngaba ufumana i-backlinks okanye ayifumanekanga, kufuneka ucofe kuyo kwaye ukhethe ukuhlola. Ngokomzekelo, ikhowudi ye-HTML yesalathisi esilandelayo ibonakala njengeGoogle, kwaye ayikho iGoogle.
Ukulandela i-backlinks kunenzuzo ngakumbi kwixesha lokwakha isixhumanisi njengoko banceda isayithi lakho ukuba liphakame phezulu kwiziphumo zophando kwaye uncede ekuphuculeni igunya lakho lezakhiwo, igunya lekhasi kunye ne-PageRank. Ngaphezu koko, bathetha iinjineli malunga nomgangatho ophezulu kunye nokubaluleka komxholo wakho.
Izindlela zokufumana i-PR high freef dof ilandelayo backlinks
Ukhonza ukwenza izixhumanisi zakho zilandele kumazwana kwi-Commentluv Enikwe iiBlogs. Unokufumana ezi bhulogi ngesandla usebenzisa iincwadana ezithile kwiGoogle (umzekelo - "iikhompyutheni zokuphawula ngekhompyutheni," "Iingxelo zezempilo zeblog blogs," "igama lakho eliphambili elikhethiweyo apha + likhangele iiblogs," njalo.
Ungakha ukwakha okulandelelanayo emva kweposi. Okokuqala, kufuneka ufumane ukuxhomekeke kwiiblogs zakho zoshishino okanye iifom ezivumela isivakashi ukuthumela. Emva koko, kufuneka uqhagamshelane nomnini webhulogi uze umcele ngokuthumela umxholo wakho ngekhonkco lokulandela. Thumela iposi yakho yeendwendwe, kwaye ngaphakathi kwithuba lakho, unokudibanisa ezinye izihloko zakho ezintsha. Ukufumana iiblogi zeendwendwe ezisemgangathweni kwi-niche yakho, unokwenza uphando lwe-Google okanye usebenzise i-MyBlogGuest yocingo lokusesha Source .